साम्यवादको मर्म : जातवाद कि मानवतावाद ? | चितवन पोष्ट
बर्सेनि बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक विपत्तिको मारमा गरिब वर्गले प्रताडना बिहोर्नुपर्छ । विपत्तिले जात, वर्ग केही पनि भन्दैन । महामारी, विपत्ति वा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मानवताको भाव जात, धर्मभन्दा ठूलो हुन्छ । जहाँ मानवताको सुगन्ध पैmलिन्छ त्यहाँ शान्ति र समृद्धिका बाटा खुला हुन्छन् । सम्पन्नले विपन्नलाई सहयोग गर्छ अनि विपन्नले सम्पन्न हुनका लागि सहायता माग्छ र पाउँछ पनि । तर, भौतिक पक्षकै धारमा मात्र रहेर हेर्ने प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ । सम्पन्नले वा दुःख गरेर कमाउनेले अर्थात् सक्ने र हुनेले सहरतिर, सुरक्षित स्थानमा सकेसम्म राम्रै घर बनाएका हुन्छन् । ठूला र राम्रा घरमा बस्छन् । तिनको चेतना स्तर पनि सबल हुन्छ । जीवनशैली र सोचको दायरा नै फरक हुन्छ । पाखा, भिरालो जमिनमा धेरै हदमा विपन्नकै झुपडी हुन्छन् । बर्सेनि तिनैले धन–जनको क्षति बिहोर्नुपर्छ । सरकारले बस्ती सार्न र सुरक्षित स्थानमा राख्ने बारेमा सोच्दैन बरु विपत्तिको सिकार भएपछि राहत दिने कर्मकाण्डे शैलीमा विगतबाटै अभ्यस्त छ ।
अर्को कोणबाट हेर्दा, विपन्नका सन्तानहरू धेरै हदमा विकलाङ्ग देखिन्छन् । तिनलाई पूर्वजन्मको फल भनेर या अन्य कुनै भ्रममा पारेर थप मनोवैज्ञानिक प्रताडनामा समाजले घृणा गर्ने कुसंस्कार पनि छँदै छ । हाम्रो समाजमा गरिबीभित्र नै अन्धविश्वास मौलाएको छ । मानवीय हिसाबमा यो विषय सङ्कुचित सोचको पराकाष्ठा हो । डुबान हुने क्षेत्रमा पनि विपन्नकै झुप्रा धेरै हदमा डुब्छन् । सम्पन्नलाई भन्दा बढी त सुकुम्वासीलाई नै पिरलो भइरहन्छ । बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । आखिर मानिस त मानिस नै हो चाहे जुनसुकै जात या धर्मको जो होओस् । तिनको पनि यस धर्तीमा बाँच्न पाउने हक हुनुपर्छ । हाम्रो समाजले अहिले जात, धर्म, लिङ्ग आदि जे जति दायरा बनाए पनि मानवताको दायरालाई बिर्सियो । परिणामतः विपन्न नै प्राकृतिक विपत्तिको मारमा परेका हुन्छन् । तिनको चेतना स्तर गरिबीका कारणले कमजोर भएको छ अनि तिनले उक्सने आधार नपाउँदै पुस्तौँदेखि विपन्नताकै स्तरमा बाँच्नुपरिरहेको हुन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा जतिसुकै गरिब भए पनि क्षेत्री÷बाहुनले अधिकार माग्नुलाई अमिल्दो ठानिन्छ तर दलित वर्गको जतिसुकै धनी भए पनि अधिकार र अवसर माग्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । त्यसैले यो एउटा समय सीमासम्म यहाँ जातीय अधिकारका आधारमा आर्थिक वर्गको विभेद कायम रहन्छ । पुरुषले महिलाबाट पीडित भए पनि अधिकार माग्नु उचित ठान्दैनन् र हत्तपत्त माग्दैनन् । यो कुरा अहिलेकै सन्दर्भमा अमिल्दो हो भन्ने भान भइदिन्छ । यो मनोवैज्ञानिक विषय हो । वास्तवमा न्याय, समानता, भाइचारा, प्रेम, सद्भावलाई जातले भन्दा बढी भावनाले कसिलो तुल्याउनुपर्छ ।
हाम्रो अहिलेको सिद्धान्त र सोचले एउटालाई सुविधा दिएर अर्कोलाई पाखा लगाउँछ । तथापि, एउटालाई न्याय गरेर अर्कोलाई मन दुखाउने पद्धतिभित्र साम्यवादी न्याय परिभाषित छैन । हाम्रो नेपाली माक्र्सवादी विचार र व्यवहारमा वास्तविकता भन्दा पर रहेर दायराको एउटा घेरो बनिसकेको छ । यो यथार्थ हो तर बोल्नलाई डराउने भय बनिसकेको छ । अहिलेको हाम्रो सोच समस्या समाधानभन्दा तर्क÷बहसमा गएर थुरिएको छ । मान्छेका समस्यालाई जातको दायराले सीमाङ्कित तुल्याउने सोचभित्र हामी खुम्चिइरहेका छौँ । कोही बिरामी हुँदा समेत जातको दायरा बनाउने सङ्कीर्णता छोइछिटोभन्दा पनि बढी भयानक हुन्छ । मिहीन विश्लेषणभन्दा अल्पज्ञ पठन र विश्लेषणमै बहसको दायरा सीमाङ्कित हुन्छ । यथार्थतर्पmभन्दा प्रतिशोधको सीमाभित्र थुरिएको सोचले शत्रुतालाई बढाउनु नै गलत छ । तब बुझेर पनि, जानेर पनि नजानेजस्तो गरेर, नबुझेजस्तो गरेर धेरैले यस विषयमा बोल्ने हिम्मत गर्दैनन् । बोलिहालेमा, लेखिहालेमा आलोचित हुनुपर्छ भन्ने ठूलो डर हुँदा यस्ता कतिपय सन्दर्भ डरलाग्दा बन्छन् । यस्ता कतिपय सन्दर्भमा कुरा गर्नु भनेको राणाकालीन शासन व्यस्थामा तिनकै विरुद्धमा बोल्नु जत्तिकै गाह्रो हुने रहेछ । क्षमतामा बार लगाउने पद्धतिका विरुद्धमा बोल्नुप¥यो भने गालीको गोली बर्सेला कि भन्ने भयले सताउँछ । किनकि, हामी अहिले सिकाइको सङ्क्रमणमा छौँ ।
महिलाले अधिकारको कुरा धेरै हदमा अघि सार्न सिकेको कुरा, दलित वर्गले समानताको हक माग्ने कुरा, महिला तथा बाल अधिकारका विषय अवश्य सह्राहनीय छन् । यी सबै कुराको चुरो समतामूलक समाजको निर्माण नै हो । भाइचारा र बन्धुत्वबोधको पूmलबारीमा रम्नु नै हो । यसर्थ योभन्दा माथिको तहमा अब मानवतावाद र आर्थिक विषमतालाई सम्बोधन गर्ने पद्धतिको खाँचो छ । देशमा १३ खर्बभन्दा बढी ऋणको बोझ छ अनि जति जनसङ्ख्या बढे पनि प्रतिव्यक्ति रु. ४३ हजार सात सय १६ भागमा आएको छ । अर्थतन्त्रको पहुँच विस्तारलाई जातका आधारमा होइन गरिबीका आधारमा, बेरोजगारिताका आधारमा हेरिनुपर्छ । सबै बाहुन÷क्षेत्री धनी हुँदैनन् र विभेद गर्ने पद्धति समाजको हो, त्यसलाई चेतनाले पनि चिर्नुपर्छ । किनभने, महिला अधिकारका आवाज जत्तिको पेचिलो रूपमा तेस्रो लिङ्गीको अधिकारलाई लिइएको देखिँदैन । यो पद्धतिलाई सधैँ एकै अर्थमा हेर्नेभन्दा समयोचित आधारमा फेर्ने र समीक्षा गर्ने अभ्यासको आवश्यकता छ ।
कुनै व्यवस्थाले कुनै वर्ग पिछडिइरहन्छ भने त्यो विषयमा विमर्श नगर्दा माथिल्लो वर्गलाई मात्रै फाइदा हुन्छ । गरिब सधैँ गरिब नै हुन्छ । हक र अधिकार माग्ने क्षमता नै नभएका दलितको आर्थिक स्तर कमजोर भएकाले चेतना पनि कमजोर भइरहन्छ । दलितभित्रकै टाठाबाठाले लडेर अधिकार लिन्छन् तर गरिब बिचरा लड्ने बाटो र आधारै बुझ्न सक्दैनन् भने त्यसले सबैको आवाजलाई सम्बोधन गर्दैन । शहरका पाँच तारे होटलमा भएका बहसले गाउँको पाखामा भएको बर्खाभरि पानी चुहिने, पहिरोले बगाउने घरको दुःख र यथार्थलाई बोल्नसम्म बोल्ला तर फरक पार्दैन । यो यथार्थलाई दशौँ वर्षदेखि बदल्न नसक्दा चेतनाको स्तर पनि सम्पन्न भएकासम्ममा मात्र थुरियो । समयले सिकाएको र सम्पन्नताले सिकाएको दायरालाई हेर्दा जातका आधारमा हुने विभेदको रङ ग्रामीण परिवेशमा जति व्याप्त छ शहरमा त्यो देखिँदैन । अहिले मान्छेलाई मान्छेकै दायरामा हेर्ने सोच शहरमा हुनुको अर्थ चेतना र आर्थिक सङ्घर्षको विकास नै प्रमुख देखिन्छ । त्यसैले गरिबी घटाउने र चेतना बढाउने सोच नभएसम्म कोटा पद्धतिले दायरा बनिरहन्छ तर यो ढिलो पद्धति हो । यसले कसैलाई पाखा राखेर वा कसैलाई घटाएर कसैलाई बढाउने भनिरहेको छ । यसबाट चेतना स्तरभन्दा बढी विभेदकै दायरालाई स्पष्ट रूपमा सीमाङ्कन गराइदियो । मान्छेलाई छुट्याउन सिकायो तर जोडिन भनेन । समृद्धिको सपनालाई उन्ने हो भने प्रत्यक्ष रूपमा विपन्नको जीवनस्तर उकास्ने उपायमा ध्यान जानु आवश्यक हुन्छ । यो मानवीय तहमा पुगेर हुनुपर्ने बहसको विषय हो ।
पानी नै अछूत ठान्ने हाम्रो अन्धविश्वासी परम्परालाई पनि आर्थिक अवस्थाको दायराले अभैm बढी बाँधेको छ । अछूत भनिएका धनीमानीका छोरीलाई बिहा गर्ने छूत भनिएकाहरूको सोचलाई आर्थिक स्तरले नै त प्रभाव पारेको हो । सोचनीय पक्ष ः महिला हक र अधिकारका कुरा गरियो तर तेस्रो लिङ्गी थोरै भएकाले छुटिरहे । दलित, आदिवासीलाई कोटा पद्धतिबाट सुविधा भनेर दिइयो तर उता जातको दबाब हटाउन जातकै सीमालाई कस्ने गरी सुविधा तोकियो । जातको दायरा बन्यो, दलितलाई दलित हुँ भन्ने बनायो अनि अधिकार माग्नुपर्छ भन्ने कुरा नै धेरै हदमा सिकायो । साँच्चै पीडित र शोषित दलितको हातमा त्यो अधिकार पुगेन र जीवन स्तर सुध्रिएन भने कोटा पद्धतिमात्रै सबैथोक हो भनिरहनु कति वाञ्छनीय होला ! यसले त मूलतः बाहुन÷क्षेत्रीहरूमा ‘कोटा पनि नपाउने हाम्रो के काम’ भन्ने सोचलाई बढायो । जातको विभेदमा जन्मेको समस्यालाई हटाउन जातकै आधारको सीमा रेखा त कोरियो तर आर्थिक विषमता र मानसिक सङ्कुचनको घेरोलाई तोड्ने चेतनशक्तिका लागि जाँगरिलो अभ्यासै भएन ।
कानुन बन्यो, केही हदमा समयानुसार पनि सोचको दायरा फराकिलो भयो तर समाजमा आपसी सम्बन्धमा फरक हुनुको अनुभूतिलाई अभैm बढी मलजल गराइदियो । यो सोचले मान्छे हुनुको मर्मबोध गर्ने मानवीय गुणलाई बुझ्ने भावनात्मक एकताको सम्बन्धलाई टाढा बनाइदियो । फलतः सामाजिक ऐँचोपैँचो, सर–सहयोग, आपसी सद्भावको सुन्दर सामाजिक सम्बन्धको डोरीलाई समेत सजातीय झुण्डभित्र लगेर खुम्च्यायो तर समानताको आँखा खोल्नुपर्नेमा आफ्नो वर्ग खोज्ने अभ्यासमात्रै गरायो । यसबाट हामीले सोचेको परिवर्तन र समाजको विकासमा एकत्वगत भावमा ठूलो प्रभाव परेको देखिन्न ।
प्रेम बढाउनुपर्ने थियो तर अन्तरविभेद र अन्तर विरोध बढायो । अधिकार खोज्न भन्यो तर अधिकार नदबाउन भन्न सकेन । हिजोको अवस्थामा कसिलो बनेको मानवताको नातोलाई जोगाउँदै अन्धपरम्परा, छुवाछुत, विभेद, कुप्रथा तोडौँ भन्ने कोणबाट व्याख्या भएन । त्यसैले, आज हामी अनुहार र जात हेरेर, पार्टी र खेमा हेरेर, लिङ्ग वा अन्य विविध वर्गलाई हेरेर झुण्ड–झुण्ड हुन मात्रै अभ्यस्त छौँ तर मानवताको आँखामा मानवले मानवलाई उकासौँ भन्ने शैलीका बारेमा कतै कसैबाट सोचेनौँ । जातवादमा गएर थुरिएको साम्यवादको लक्ष्य दसौँ वर्षदेखि केवल पृथक् दायरा निर्माणमा सीमित भइरहेको छ तर चाहेको परिवर्तन भएन । कसैमाथि बेकसुर अन्याय गरिरहिएको छ । त्यहाँ मानवताको पर्खाल ढलिरहेको छ । हामी त समीक्षा र विश्लेषण आपूmमुखी गरिरहँदा इतिहासलाई गाली गर्छौँ तर वर्तमानलाई बिर्सन्छौँ । अधिकारका कुरा गर्छौँ तर कर्तव्य भुल्छौँ । कानुन बनाउँछौँ तर न्याय बिर्सन्छौँ । त्यसैले अहिलेको पद्धति सोचको दायरा र सङ्क्रमणकालीन शैलीमा अनुबन्धित रहेको देखिन्छ । यो सोचले विभेद अवश्य बढ्छ तर साम्यवाद सम्भव नहुन सक्छ । अबको दायराभित्र भाइचारा र प्रेम पनि हुनुपर्छ । अन्तर्जातीय विवाह हुँदैमा, छोएको–नछोएको भन्दैमा मानवताको सम्बन्ध कसिलो हुँदैन किनकि जहाँ मानवता हुन्छ त्यहाँ विदेशको, स्वदेशको, यो जात या ऊ जात नभएर केवल मानिस मात्र बाँकी रहन्छ । त्यहाँ साम्यवादमा उक्लने सहयोगी समाज स्वतः कायम रहन्छ । हाम्रो समाजको आर्थिक विषमता चिर्ने सोचका बारेमा अघि बढ्ने हो भने समाजले हिजोको भाइचारा समात्छ तर विभेद र अन्धविश्वासलाई तोड्छ र साम्यवादको द्रुत मार्ग खुल्न सक्छ ।
प्राकृतिक विपद् र महामारीमा सुरक्षाकर्मीको भूमिका